Ukufakwa kwemigca yeglavu yemveliso yeglavu kunye neenkonzo zokugunyazisa zahlulwe zaziindidi ezimbini zilandelayo
1. Isiseko senkonzo yokufaka isikhokelo:
1) Emva kokuba izixhobo kunye nezinto zithunyelwe kwisiza, ikontraka ngokubanzi okanye iyunithi yofakelo ilungiselela ukothula kumgca wokukhokela wabasebenzi bethu bezobuchwephesha, kwaye ikhusela iimveliso ezigqityiweyo kwisiza. Emva kokuba izixhobo zisothulwe, abasebenzi bethu baya kuhamba nekhontraktha ngokubanzi okanye iyunithi yofakelo kunye nabanye abasebenzi besebe ukuya kujonga kwaye bahlole izixhobo.
2) Ukucaciswa kwezobuchwephesha kunye nomsebenzi wokucaciswa kwezobuchwephesha kuya kwenziwa ngaphambi kokufakwa kwezixhobo. Iingcali zethu ziya kucacisa ngobuchule isicwangciso sokufakwa kwezixhobo kunye nemizobo yokufakelwa kwezixhobo kunye nezinye izinto ukuqinisekisa ukuba abafaki banokuzifaka izixhobo ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo.
3) Ngokwesicwangciso sokufakwa kwesixhobo, ikhontraktha ngokubanzi okanye inkampani yofakelo inoxanduva lokuphakamisa indawo, ukuwelda kunye nokufaka izixhobo, kwaye amagcisa ethu abonelela ngesikhokelo sobuchwephesha kwindawo. Emva kokuba izixhobo zifakiwe, amagcisa ethu aya kuhlola umgangatho wofakelo lwezixhobo kwaye enze uhlolo olusemgangathweni kuzo zonke izixhobo ezifakwe kwisiza ukuqinisekisa ukuba izixhobo zifakwe ngokuchanekileyo.
4) Ukugunyazisa kunye nokwamkelwa kwangaphambili: Emva kokuba izixhobo zifakiwe, kufuneka zigunyaziswe, kubandakanya izixhobo zokugunyazisa oomatshini kunye nokugunyazisa imichiza. Inkampani yethu iyakwabela umntu okhethekileyo ukuba asebenzisane kwaye akhokele ikhontraktha ngokubanzi ukwenza lo msebenzi. Emva kokugunyaziswa, ukuvavanywa kunye nohlengahlengiso kufanelekile, yiya kwiinkqubo zokuqala zokwamkelwa ngokwamalungiselelo. Siza kubonelela ngengxelo yokugunyaziswa kwezixhobo kwangexesha njengesiseko sokwamkelwa kokuqala.
5) Ngexesha lenkqubo yonke yofakelo lwezixhobo, umphathi weprojekthi uhlala esenza iinkonzo zokulandela. Umphathi weprojekthi unoxanduva lokucwangcisa, ukulungelelanisa kunye nokulungelelanisa kunye neyunithi yokufakelwa kwabasebenzi bezobuchwephesha kwindawo, inkqubela phambili yokufaka izixhobo zeDu Ze, imiba yezobuchwephesha kunye nomgangatho, kunye nokunxibelelana nabathengi ngolungelelwaniso nentsebenziswano.
6) Ngexesha lenkqubo yonke yofakelo lwezixhobo, umthengi kufuneka athumele ubuncinci amagcisa ama-2 ukulandelela kunye nokufunda ulwazi ngoomatshini nezixhobo
7) Ngexesha lesigaba sokulungisa izixhobo, umthengi kufuneka athumele ubuncinci iinjineli zeekhemikhali ezi-2 zokulandela kunye nokufunda ngetekhnoloji yokuvelisa iglavu.
2. Imveliso yokufakwa kwenkonzo:
Ngokweemfuno zabathengi abohlukeneyo, i-Chuangmei ikwanokubonelela ngeenkonzo zokufaka kumgca wemveliso, oko kukuthi, uChuangmei ubiza iifizi ezinxulumene nokufakwa kwaye ubonelele ngenkonzo yokumisa enye ukufakela umgca wokuvelisa kunye nokugunyazisa. Uncedo lwale nkonzo kukuba uChuangmei ulawula inkqubela phambili yokufaka kwaye unciphise iingxaki ezininzi. Unxibelelwano oluyimfuneko kunye nokulibaziseka kusebenza ngakumbi kwaye umgangatho wokufakwa uqinisekisiwe.